Ksnip: ဖန်သားပြင်များအတွက်အခမဲ့ platform အမျိုးမျိုးရှိသော Qt-based app | Linux မှ
Ksnip - ဖန်သားပြင်များအတွက်အခမဲ့နှင့် cross-platform Qt အခြေခံအက်ပလီကေးရှင်း
Linux Post Install လုပ်ပါ | 09/06/2021 06:00 | applications များ, သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ခေါ်သောခေတ်မီ။ အသုံး ၀ င်သော application အကြောင်းပြောပါမည် "Ksnip"။ ဘယ် app ကများစွာသော app တစ်ခုဖြစ်သည်, အဘယ်သူ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ မျက်နှာပြင်ဖမ်းယူခြင်း ငါတို့ထံမှ စားပွဲခုံများဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာအတွင်းမြင်သာစွာအလုပ်လုပ်နေသည့်အရာဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့် "Ksnip" ဖြစ်ခြင်းအပြင် အခမဲ့, ခေတ်သစ်နှင့် multiplatformလည်းခွင့်ပြုပါတယ် တည်းဖြတ်နှင့်မျှဝေပါ ထုတ်လုပ်ပြီးတည်းဖြတ်သည့်ဖန်သားပြင်များ။
ShareX: Windows တွင် Screenshot အတွက် Open Source App
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ၏လယ်ပြင်၌ပေမယ့် မျက်နှာပြင် grabbers, ငါများသောအားဖြင့်ငါ့ဇာတိ application ကိုအသုံးပြုပါ Desktop Environment (XFCE နှင့် Plasma)တစ်ခါတစ်ရံငါအသုံးပြုလိုသောနှင့်အကြံပြုလိုပါတယ် shutter.
သို့သော်များစွာသောရှိပါသည် အလားတူသို့မဟုတ်အခြားရွေးချယ်စရာ apps များ နှစ်ခုလုံးအတွက်အရမ်းကောင်းတယ် GNU / Linux များအဖြစ် Windows ကို o MacOS။ ထို့ကြောင့်၊ အောက်ဖော်ပြပါအကြောင်းအရာသည်စိတ်ဝင်စားသူများအတွက်အလားတူလျှောက်လွှာများနှင့်ပတ်သက်သောယခင် entries များနှင့်သက်ဆိုင်သောလင့်ခ်များကိုချန်ထားလိမ့်မည်။
"ShareX သည်အခမဲ့ဖြစ်ပြီးပွင့်လင်းသော application တစ်ခုဖြစ်ပြီးကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်၏မည်သည့်captရိယာကိုမဆိုဖမ်းယူနိုင်သည်သို့မဟုတ်မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ပြုလုပ်ထားသောဖမ်းယူချက်များကိုမျှဝေနိုင်သည်၊ ပုံများ၊ စာသားများသို့မဟုတ်အခြားဖိုင်အမျိုးအစားများကိုပြင်ဆင်နိုင်ပြီးသင့်လျော်သောနေရာများစွာသို့မျှဝေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သော Screen Capture၊ ဖိုင်ဝေမျှခြင်းယန္တရားနှင့်အသုံးဝင်သောကုန်ထုတ်စွမ်းအားဖြစ်စေသည့်အကြောင်းရင်းများ။" ShareX: Windows တွင် Screenshot အတွက် Open Source App
Flameshot - linux အတွက်အစွမ်းထက်တဲ့ screen grabber
Shutter - ကောင်းမွန်သော screen capture tool ။
–Shots - မျက်နှာပြင်ကိုဖမ်းယူရန်စိတ်ဝင်စားစရာကိရိယာ
1 Ksnip: Screenshot and Annotation Tool
1.1 Ksnip ဆိုတာဘာလဲ။
Ksnip: Screenshot and Annotation Tool
သင့်ရဲ့အဆိုအရ GitHub ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်, "Ksnip" es:
"Cross-platform ဖန်သားပြင်နှင့်မှတ်စုများ။ ထို့အပြင်၎င်းသည် Qt ကို အခြေခံ၍ သင်၏ဖန်သားပြင်များအတွက်မှတ်စုများကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။"
"Ksnip" လက်ရှိကသူ့အဘို့အသွား 1.9.0 ဗားရှင်းဖြန့်ချိပြီးနောက်ရက်အနည်းငယ်သော။ ထို့ကြောင့်၊ လက်ရှိတွင်၎င်းသည်အခြားသူများစွာတွင်အောက်ပါလက္ခဏာများနှင့်သတင်းများရှိသည် -
Multiplatform ထောက်ခံမှု- Linux အတွက် (X11, Plasma Wayland, GNOME Wayland နှင့် xdg-desktop-portal Wayland)၊ Windows နှင့် macOS တို့အတွက်။
ဖမ်းဆီး။ ။ mouse cursor ဖြင့်ရေးဆွဲနိုင်သည့် custom rectangular area ကို mouse / cursor လက်ရှိရှိရာ screen / monitor ၏၊ screen / monitors အားလုံးအပါအ ၀ င်၊ screen ၏ Monitor များအားလုံး၏လက်ရှိမြင်ကွင်း၊ အခြားပုံစံများ (သို့) စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုများအကြား၊
ဝေစု: မျက်နှာပြင်ရိုက်ချက်များကို imgur.com သို့အသုံးပြုသူသို့မဟုတ်အမည်မသိဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ပါ။ ပြီးတော့သူတို့ကိုစိတ်ကြိုက်အသုံးပြုသူသတ်မှတ်ထားသော scripts များမှပင် upload လုပ်ပါ။
ပြင်ဆင်ရန်- ဘောပင်၊ အမှတ်အသား၊ စတုဂံ၊ ဘဲဥပုံ၊ စာသားနှင့်အခြားသက်ရောက်မှုများဖြင့်ဖန်သားပြင်များကိုမှတ်သားရန် (တည်းဖြတ်ရန်) လွယ်ကူစေသည်။ ထို့အပြင်သင်၏ကိုယ်ပိုင် (သို့) ကိုယ်ပိုင်စတစ်ကာများကိုအသုံးပြုရန်၊ မှုန်ဝါးစေသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုပုံ၏မှုန်ဝါးမှုနှင့် pixelation ဖြင့် အသုံးပြု၍ ရုပ်ပုံများကို (အရိပ်၊ မီးခိုးရောင်၊ အရောင်သို့မဟုတ်နယ်စပ်ကိုပြောင်းပြန်လှန်) ထည့်သွင်းပါ။
၎င်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက်၎င်းကိုအားလုံးနီးပါးတွင်တိုက်ရိုက်တပ်ဆင်နိုင်သည် GNU / Linux Distros၊ မှတဆင့် အထုပ်မန်နေဂျာ ဇာတိဂရပ်ဖစ်, ဒါမှမဟုတ် console ကို။ ဒါပေမယ့်မင်းကိုသုံးဖို့ နောက်ဆုံး သင်သည်တတ်နိုင် ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးထည့်သွင်းပါ အောက်ပါမှလိုအပ်သောသို့မဟုတ်သင့်လျော်သော executable ဖိုင်ကို link ကို နှင့်ဤသည်အခြားအလွန်အသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာ link ကို။ အသုံးပြုရန်၎င်းကို Applications Menu မှတဆင့်သာအသုံးပြုသင့်သည်။
လျှောက်လွှာနှင့်ပတ်သက်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက၎င်း၏ကွဲပြားခြားနားသော installer များနှင့်ဗားရှင်း, နှင့် installation ပုံစံများကို, သင်တို့အပေါ်မှာအောက်ပါလင့်များသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် "Ksnip" နှင့်:
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" ခေါ်အခမဲ့, အခမဲ့နှင့် Cross-platform application ကိုအကြောင်းကို «Ksnip»၎င်း၏ယေဘူယျဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်၎င်း၏ဗားရှင်းအသစ်၏သတင်း «1.9.0» မကြာသေးမီကထုတ်ပြန်ခဲ့သည်; တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Ksnip - ဖန်သားပြင်များအတွက်အခမဲ့နှင့် cross-platform Qt အခြေခံအက်ပလီကေးရှင်း